U-Yemi Alade, u-Angelique Kidjo kunye nezinye iingoma zaseNigeria zeVeki
WImini yeValentine ejikeleze ikona, iimvumi zaseNigeria zikhanyisa imiboniso yomculo ngokukhutshwa kwazo kutshanje. Kuqala nguMama Afrika, Yemi Alade ukusebenzisana nembali yaseAfrika kunye nembasa yeGrammy Angélique Kidjo ukusizisa Shekere. I-duo igxininise iinkcubeko ezahlukeneyo zase-Afrika ngokudanisa kunye nefashoni njengoko uYemi ehlobe imbonakalo eyahlukeneyo ye-beaded kunye neprints ze-Ankara, ngelixa i-Angélique yabonwa kwisithsaba-entloko esijongene nesiZulu.
Ngelixa uYemi Alade kunye nemvumi yase-Beninese u-Angelique Kidjo besenza Shekere nabantu baseMasai, imidaniso ye-dancehall, I-Patoranking besisazisa ukuba usemathandweni. Ngaba ufuna ukwazi ukuba zeziphi iimvumi zomculo wakho ze-fave uye kuzo njengoko uphumla kule mpelaveki?
Nazi iingoma ezi-5 ezishushu zaseNigeria ukumamela kule mpelaveki…
1. U-Yemi Alade, u-Angelique Kidjo - Shekere
U-Yemi Alade no-Angelique Kidjo bahambisa ingoma emnandi igama emva kwesixhobo somculo wegubu elidlalwa kwimimandla eyahlukeneyo yelizwekazi. Amagama aziva kamnandi esiNgesi nase-Yoruba ngaphezulu kwe-tempbeat tempo egcwele ngokutolikwa kwengxelo ka-Angelique Kidjo ka-1996 "IWombo Lombo," yenza isiqalo esifanelekileyo ukuya kwimpelaveki.
2. I-Patoranking -Ndikuthanda
Ngeli xesha lothando, I-Patoranking wenza okungakumbi kunokucula nje ngokuba nothando. Emva kokumiliselwa kwesiseko semfundo kunye nenkqubo yokufunda, usipha isipho ngegama elitsha elinye Ndisemathandweni!
Ucula ngokuthandana nomntu obhinqileyo ekuphela kwekona yakhe. Uqhubeka nokuluyisa umfazi wakhe njengoko embonisa iindumiso.
3. I-Tekno, i-Masterkraft - uBee Beh
Kwindlela yakhe yokuqala eyodwa yonyaka, inkwenkwezi ye-Afrobeat Tekno amaqela phezulu kunye Umsebenzi omkhulu ukucula malunga neyakhe beh beh. UTekno ucula ngokuyeka abanye abantu basetyhini ukuba babe nomntwana wakhe kwaye ufuna ukuba adanise i-reggae kunye ne-blues kunye naye.
4 Phyno x Harrysong x illbliss x KezyKlef -Jolisa
I-rapper yaseNigeria, I-Illblissrapper yemveli, Phyno Imvumi enetalente, IHarrysong badibana bonke ukuhlangula enye egqibeleleyo Gxi ninisa. Ngokwe-trio, akukhathaleki nokuba ungantoni na, kuya kufuneka ufunde ukungqungqa kwaye ugxile. Emveni kwakho konke, "Thetha ungathethi uzise imali, garri don indleko yentengiso, intombazana intle yona iyahamba ifuna imali kwaye ayithandi ukuba nomlomo ngomlomo."
5. Ice Prince Ft. Skales - iTatabara
Awunakuqonda ulwimi lweHausa ukuze ukonwabele olu lwodwa Ice Prince kwaye Skales. Olu thando luthando ngumculo ofanelekileyo wokuphela kweveki kunye. IsiTatabara Oko kuthetha ukuba ukuqokelela kune-duo icela umntwana wabo ukuba aqokelele izinto abanika zona njengoko ebanika yonke into abayithandayo.
Ityala lomfanekiso obonisiweyo: I-Instagram | Michaeltubescreations
Angelique Kidjo harrysong inkosana yomkhenkce iLLBliss I-MasterKraft I-Patoranking phyno Shekere Skales Tekno Yemi Alade
titi Dokubo Februwari 7, 2020
UGqr Sid ufuna ukuba ungene eGroove, iirekhodi zeMavin zibhiyozela iminyaka eyi-8 kunye neengoma zeNdawo yeAfterat
Igolide ye-Adekunle isinika enye into eyahlukileyo, uDon Jazzy ufuna ukuba uhlale ukhuselekile + ngakumbi izandi ze-Afrobeat